Isahluko 36.Ukuzazi Ngokuyinhloko Kuwukwazi Imvelo Yomuntu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Inhloso yokuzuza ushintsho esimweni ukwazi imvelo yakho siqu, futhi lokhu kumele kuze ngesambulo esivela kuNkulunkulu. Kungezwi likaNkulunkulu kuphela lapho umuntu engazi khona ngemvelo yakhe enyantisayo, aqaphele emvelweni yakhe siqu ubuthi obuhlukahlukene bukaSathane, abone ukuthi uyisiphukuphuku futhi akanaki, futhi aqaphele ubuthakathaka nezici ezingezinhle kwimvelo yaakhe. Lapho lokhu sekwaziwa kahle, futhi usukwazi ukufulathela inyama ngokweqiniso, uqhubeka nokusebenzisa izwi likaNkulunkulu, futhi uzimisele ukuzithoba eMoyeni Ongcwele nasezwini likaNkulunkulu, uzobe usungene endleleni kaPetru. Ngaphandle komusa kaNkulunkulu, uma kungekho ukukhanyiselwa nokuholwa uMoya Ongcwele, kuzoba nzima kakhulu ukuhamba le ndlela, ngoba abantu abanalo iqiniso futhi abakwazi ukuzinikela. Ukuhamba endleleni yokupheleliswa leyo uPetru ahamba kuyo, kuqala umuntu kumele abe nesifiso sokwenza kanjalo, kumele babe nesiqiniseko, futhi bancike kuNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, kumele azithobe emsebenzini woMoya Ongcwele, nakuzo zonke izinto ezingachezuki ezwini likaNkulunkulu. Lezi izingxenye eziningana ezibalulekile, asikho kuzo esingephulwa. Kunzima kakhulu ukuzazi phakathi nokubhekana nesimo. Ngaphandle komsebenzi kaMoya Ongcwele kunzima kakhulu ukungena kuwo. Ukuze ahambe endleleni uPetru ahamba kuyo umuntu kumele agxile ekuzazini yena nasekushintsheni isimo. UPawulu wahamba ngendlela engakufuni ukuphila, futhi engazange igxile ekuzazini. UPawulu ngokukhethekile wagcizelela umsebenzi, isithunzi nethonya lomsebenzi. Isikhuthazo sakhe sasiwukuthola izibusiso zikaNkulunkulu esikhundleni somsebenzi nokuhlupheka, ukuze athole umvuzo kuNkulunkulu. Lesi sikhuthazo sasingalungile. Akazange agcizelele ukuphila, noma akazange aqinise ekushintsheni isimo. Wagxila kuphela emvuzweni. Njengoba wayefuna umgomo ongalungile, indlela ayehamba ngayo kusobala kwakuyindlela engalungile. Lokhu kwakwenziwa ukuzikhukhumeza nokuzazisa kwakhe. Ngokusobala, wayengenalo iqiniso, futhi engenanembeza noma isizathu. Ekusindiseni abantu, uNkulunkulu uvame ukushintsha abantu ngokushintsha izimo zabo. Injongo yezwi likaNkulunkulu ukuthola kubantu izenzo eziwumphumela wokushintsha kwesimo sabo, ukuze abantu bakwazi ukumazi uNkulunkulu, bazithobe Kuye, futhi bamkhonze ngendlela evamile. Lona umgomo wezwi likaNkulunkulu nomsebenzi Wakhe. Indlela kaPawulu yokufuna iphikisana ngokuqondile futhi ishayisana nenjongo kaNkulunkulu. Iphikisana ngokuphelele nezinhloso. Indlela kaPetru yokufuna, yona ivumelana ngokuphelele nenjongo kaNkulunkulu, ngokusobala eveza umphumela walokho uNkulunkulu afisa ukukuthola kubantu. Ngakho indlela kaPetru ibusisekile futhi ithola udumo lukaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi indlela kaPawulu iphikisana nenjongo kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyayenyanya futhi uyayiqalekisa. Ukuze ahambe endleleni uPetru ahamba ngayo umuntu kumele azi injongo kaNkulunkulu. Uma umuntu ekwazi ukuyiqonda ngokugcwele injongo kaNkulunkulu ezwini Lakhe, okusho ukuqonda ukuthi yini uNkulunkulu afuna ukuyenza ngomuntu nokuthi yimuphi umphumela afuna ukuwuthola, yilapho kuphela umuntu azokwazi khona ukulandela indlela ngokunembile. Uma ungayiqondi ngokugcwele indlela kaPetru, futhi umane nje ufisa ukuyilandela, angeke ukwazi ukuyiqala. Ngamanye amazwi, wazi izimfundiso eziningi, kodwa awukwazi ukungena ngokoqobo. Nakuba ungangena ngokungajulile, awukwazi ukuthola umphumela wangempela. Kulezi zinsuku abantu abaningi banokuqonda okukha phezulu kwabo ngokwabo. Abazange nhlobo bazazi ngokucacile izinto eziyingxenye yemvelo yabo. Baze nje ukukhohlakala okumbalwa kuphela kwalokho abakwenzile, izinto okungenzeka bayazenza, noma amaphutha abo ambalwa, ngakho bakholelwa ukuthi bayazazi bona. Uma bezithoba emithethweni embalwa, kuqinisekisa ukuthi abawenzi amaphutha ezindaweni ezithile, futhi bakwazile ukugwema izono ezimbalwa, ngakho bavele bazitshele ukuthi kungokoqobo ukukholelwa kwabo kuNkulunkulu nokuthi bazosindiswa. Lokhu kuwukucabanga komuntu ngokuphelele. Uma uthobela lokhu, ungakwazi ngempela ukungabi nasono? Ingabe kufinyelelwe kwisimo esishintshile ngempela? Ingabe ngempela uphila ngaphandle kwalokho okuthandwa abantu? Ingamenelisa ngempela uNkulunkulu? Akunjalo ngempela, lokhu kuyiqiniso. Ukukholelwa kuNkulunkulu kusebenza kuphela lapho umuntu enamazinga aphakeme, ukuthola iqiniso nokushintsha kwesimo empilweni yakhe. Uma ulwazi lomuntu ngaye ngokwakhe lukha phezulu, angeke akwazi ukuxazulula izinkinga, futhi isimo sakhe sokuphila angeke sishintshe. Kubalulekile ukuzazi ngendlela ejulile, okusho ukwazi imvelo yakho, nokuthi yiziphi izici ezihlanganisiwe emvelweni yomuntu, kusuka lapho izici zivuka khona nokuthi zibe khona kanjani. Ngaphezu kwalokho, ingabe uyakwazi ngempela ukuzonda lezi zinto? Ingabe uwubonile umphefumulo wakho omubi nemvelo yakho enonya? Uma umuntu ekwazi ngempela ukubona iqiniso ngaye ngokwakhe, uzoqala ukuzenyanya. Lapho uzenyanya futhi wenza okusezwini likaNkulunkulu, uzokwazi ukufulathela inyama, futhi ube namandla okwenza iqiniso ngaphandle kobunzima. Kungani abantu kwasekuqaleni babelandela inyama? Ngoba babezibheka njengabalungile. Ubezizwa elungile futhi ezithethelela, bengenaphutha, belunge ngempela. Ngakho Ubenza sengathi Unobulungisa. Lapho umuntu eqaphela ukuthi imvelo yakhe iyini, yeka ukuthi kubi kanjani, yeka ukuthi kunyanyisa kanjani nokuthi kudabukisa kanjani, akabe esazazisa kakhulu, akabe esaba ngoziqhenyayo futhi akabe esazijabulela njengoba ayenza phambilini. Uzizwa kanje, “kumele ngibe qotho futhi ngizehlise, futhi ngenze okuthile kokushiwo yizwi likaNkulunkulu. Uma kungenjalo, angeke ngihlangabezane nendinganiso yokuba umuntu, futhi ngizoba namahloni okuphila phambi kukaNkulunkulu.”Uzibona engelutho, engabalulekile. Ngalesi sikhathi kulula kuye ukufeza iqiniso, futhi ubukeka njengomuntu ngempela. Kulapho kuphela umuntu ezinyanya yena azokwazi ukufulathela inyama. Uma engazenyanyi, angeke akwazi ukufulathela inyama. Ukuzizonda kuhlanganisa izinto ezimbalwa: okokuqala, ukwazi imvelo; okwesibili, ukuzibona udinga futhi udabukisa, ukuzibona umncanyana futhi ungabalulekile nokuzibona unomphefumulo odabukisayo, umphefumulo ongcolile. Uma umuntu ezibona lokho ayikho ngempela futhi kutholakele lomphumela, usuke ezazi ngempela, futhi singasho ukuthi usezazi ngokugcwele. Yingaleso sikhathi ke azokwazi khona ukuzizonda, aze aziqalekise, ezwe ukuthi ubonakaliswe uSathane ngokujulile, kangangokuba ubengasafani nomuntu. Ngakho ngelinye ilanga, lapho ukufa kuvela eduze kakhulu, uzozwa ethi, “O! Isijeziso sikaNkulunkulu sokulunga. UNkulunkulu ulungile ngempela. Kumele ngife ngempela!” Kulesi sikhathi, ngeke afake isimangalo, ingasaphathwa eyokugxeka uNkulunkulu, ezizwa sengathi udabukisa kakhulu, ungcole kakhulu futhi wonakele, ukuthi uzoshanelwa uNkulunkulu futhi umphefumulo awufanelwe ukuphila emhlabeni, ngeke enqabe, ingasaphathwa eyokukhaphela noma akhononde kuNkulunkulu. Uma engazazi, usaqhubeka ezibheka njengomuntu omuhle kakhulu, lapho ukufa kumsabisa, uzwa esethi, “Ngikholwe kahle kuNkulunkulu. Yeka indlela engimfune ngayo! Nginikele okukhulu, ngihluphekile impela, futhi uNkulunkulu ungicela ukuba ngife. Angazi ukuthi kuyephi ukulunga kukaNkulunkulu. Kungani uNkulunkulu efuna ukuba ngife? Uma umuntu onjengami efa, ubani ozosindiswa? Angeke uhlanga lwesintu luphele?” Okokuqala unemibono ngoNkulunkulu. Okwesibili, unokukhononda; akukho nhlobo ukuzithoba. Ngokwesibonelo, lapho uPawulu esezokufa, wayengazazi. Lapho isijeziso sikaNkulunkulu sifika, kwase kwephuzile ukuphenduka.
Okwedlule：Isahluko 34. Ukubaluleka Nendlela Yokwenza Umthandazo
Okulandelayo：Isahluko 39.Umehluko Phakathi Kwezinguquko Zangaphandle Kanye Nezinguquko Esimweni
Izwi Lesihlanu Ihubo lombuso Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Obe Inyama